Miisaaniyad: Xaaladda Dhaqaale ee Dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Saadaalinta dhaqaale ee dawladda
Miisaaniyad: Xaaladda Dhaqaale ee Dalka
La daabacay tisdag 20 september 2011 kl 09.52
Rajadii wanaagsanayd ee laga qabay xaaladda dhaqaale ee dalka xilligii gu'ga ayaa xilligan dayrta ee maanta la soo ban-dhigi doono miisaaniyadda sannadka foodda innagu soo haysa isku badashay mid aan rajada laga qabo kobaca dhaqaale sidaa u wanaagsanayn.
Anders Borg, wasiirka dhaqaale ee dalka ayaa sheegay in sannadka foodda innagu soo haya ee 2012 ey dalka hor-taagan yihiin koboc dhaqaale ee hooseeya, shaqa-abuurka oo istaaga iyo shaqa-la'aanta oo kor u kacda. Waxaa jira suurtagal miisaaniyad-gelin ee 15 milyaard oo koron, sidoo kale gacan loo fidiyo siyaasadda suuqa shaqada haddii xaaladda dhaqaale ee dalku sida la saadaalinayo hoos uga sii dhacdo. Kobaca dhaqaale ee dalka ayaa sannadka noqon doona oo keliya 1,3%. Halka uu wasiirku xilligii gu'ga qabay koboc dhaqaale ee gaarsiisan 3,8%. Dib u soo kaabashadii dhaqaale ee dalka ayaa ka hooseeynaya xowligii uu ku socday, inkastuu wasiirku rajeeynayo in uu kor u kici doono kobaca dhaqaale ee dalka dhammaadka sannadka 2012, guud ahaanna kobaca dhaqaale uu aakhirka gaari doono 3 - 4%.
Shaqa-la'aanta ayaa xoogaa kor u kici doonta sannadka soo socda gaarina doonta 7,8%. Borg ayaa sidoo kale qaba in kolka dhaqaaluhu isa soo taabo ay shaqa-la'aantu hoos u dhici doonto sannadka 2015, iyadoona gaari doonta 5,5%
Waxa wax u dhimaya saameeyna ku yeeshay dhaqaalaha dalka Iswiidhen xaaladda dhaqaale ee aan sugnayn ee ka aloosan dalka Mareeykanka iyo waddammada laga isticmaalo lacagta Euro-ga.
Hoos u dhac ku yimaada baayacmushtarka dhoofinta ayna sababaan taxadarka iibisga bulshada iyo maal-gelinta shirkadaha.
Dawladda ayaa ku maal-gelin doonta miisaaniyad gaarsiisan 15 milyaard oo koron sidii loo fududeeyn lahaa gaabinta koboca dhaqaale, halka sannadka 2013 ay dawladdu ku miisaaniyad gelin doonto 17 milyaard ee koron.
Miisaaniyad gaareeysa 5 milyaard ee dhismaha waddooyinka xadiidka iyo kuwa baabuurta dayac-tirkooda labada sannadood ee foodda innagu soo haysa ayaa ka mid ah. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay maalgelin suuqa shaqada iyo sidii taageero loogu fidin lahaa dadyowga muddo xannuunka ku qornaa iyo bulshada ay ku adag tahay sidii ey ku dhex-maquuran lahaayeen suuqa shaqada xilliga dhaqaaluhu liito.
Dhimista cashuurta dadban ee maqayadaha oo ku kici doonta 5,5 milyaard sannadka foodda innagu soo haya ayaa loo arki karaa sidoo kale tallaabo dhaqaalaha lagu xoojinayo, waana mid dawladdu uga golleedahay shaqa abuur mustaqbalka dheer, sida ku cad war laga soo xigtay.